हेर्नुस जेठ महिनाको राशिफल, कुन राशीलाई कस्तो ? - Experience Best News from Nepal
हेर्नुस जेठ महिनाको राशिफल, कुन राशीलाई कस्तो ?
जेठ ३२ गतेसम्म वृष राशिमा बक्र हुनेछ । यसरी सूर्यले घर परिवर्तन गर्दा केही राशिमा अवश्य असर पर्छ । तर यो पटक १२ वटै राशिमा असर जमाएको छ । हेरौ कुन राशिलाई कस्तो असर छ । यो जानकारी आफुले हेरेपछि अरुलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला ।
मेष, वृष, कुंभ, मीनका लागि शुभ छ । सूर्य, तर सूर्य केही राशिका लागि भने हानिकारक बनेर आइको छ । बुधवार, १५ मई अर्थात जेठ महिनाको १ गते बुधबार हो । यो दिनको दोस्रो प्रहरबाट १५ जून अर्थात जेठ महिनाको ३२ गतेसम्म सूर्य वृष राशिमा रहेनेछन् । वृष शुक्रको स्वामित्व वाला राशि हो । शुक्र अहिलेसम्म मेष राशिमा सूर्यका साथ थिए ।
उज्जैनका ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्माका अनुसार मेष, वृष, कर्कट, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ र मीन राशिका लागि सूर्य शुभ रहनेछन् । मिथुन, सिंह, धनु राशिका मानिसका लागि सूर्यले अशुभ असर दिनेछन् । । जान्नुहोस् सबै १२ राशिकै लागि वृष राशिमा सूर्य बस्दा कस्तो फल मिल्दैछ । र कस्तो असर गर्दैछ ।
तपाईका लागि सूर्य बाधा ब्याबधान हटाउनका लागि । कार्य सम्पन्नका लागि प्रवेश गर्नुभएको छ । पर निर्भरता समाप्त हुनेछ । आफ्ना सबै काम पूरा हुनेछन् । जीवन सफलतातर्फ अघि बढ्नेछ । व्यवहारमा भने संयमिता राख्नुहोस् ।
द्वादश सूर्य तपाईको राशिमा प्रवेश गर्दैछ । यसले तपाईलाई हैरानी दिनेछ । आर्थिक कार्यमा ज्यादै सावधानी राख्नुहोला नत्र यसले असर गर्नेछ । हानी नोक्सानी हुनेछ । वाहनको प्रयोगमा अति होसियारी अपनाउनुहोला । लापरवाहीले जीवनकै क्षति बनाउने योग छ ।
चतुर्थ सूर्य तपाईको राशिमा प्रवेश गर्दैछ । यसले प्रतिष्ठामा वृद्धि दिलाउनेछ । केहिदिनदेखि आर्थिक संकट झेल्दै आउनुभएको थियो । अब त्यो दिन टाढा भाग्दैछ । धन लाभ मिल्नेछ । मनग्गे आर्थिक उपार्जन गर्नुहुनेछ । मनमा खुशी छाउनेछ । परिवारमा हर्ष बढ्नेछ ।